May 9, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Magaala madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaa maalintii 5aad ka dhacay shirar u dhexeeya madaxda dowladda federalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka.
Shirarkaan oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra’iisul wasaare Khayre, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo koonfur Galbeed Soomaaliya.
Qodobada ugu muhiimsan ee shirkaan diiradda lagu saarayey ayaa waxaa kamid ahaa, xallinta khilaafka u dhexeeya madaxda DFS iyo DG, dhammaystirka dastuurka, ammaanka dalka, qaybsiga deeqaha iyo khayraadka dalka, doorashooyinka 2020, xaaladda siyaasadeed ee deegaamada Galmudug iyo arrimo kale.
Bilowgii shirka waxaa hareeyey khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka soo horjeedey qorshaha uu shirka uga qaybgelayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cali Yariisaw.
Ka sokow furitaanka shirka waxaa jirey kulamo gooni gooni ah oo u dhexeeya madaxda dowladda federalka ah iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Geelle Ducaale (Xaaf) oo ay siweyn isu hayaan madaxda dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Marar badan waxaa lagu kala kacay shirka kadib markii lagu heshiin waayey qodobka quseeya xeerka doorashooyinka Soomaaliya ee golaha xukuumaddu meel mariyeen iyo qorshaha Villa Somalia ka damacsan tahay Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug ayaa saacado ka maqnaa shirarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay qasriga madaxtooyada Puntland inkastoo ugu dambayn lagu guulaystay in la soo celiyo isla markaana waxaa wararka qaar sheegayaan in laysku afgartay qodobadaasi walow ay weli taagan yihiin kuwii ugu muhiimsanaa ee masiirka dalka quseeyey.